यसकारण आवश्यक भयो ‘जनसम्पर्क समितिको विश्व सञ्जाल’ : चित्र केसी – Nepali Digital Newspaper
हाम्रा सेलिब्रेटी, युट्यूबर र युट्यूबका शीर्षक
कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या ६० लाख बढी, लकडाउन खोल्न सबैतिर हतारो
नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनका पक्षमा मतदान गर्ने
परीक्षणबिनै झुलाघाट नाकाबाट एक हजार भित्रिए
यसकारण आवश्यक भयो ‘जनसम्पर्क समितिको विश्व सञ्जाल’ : चित्र केसी
घटना र विचार, न्युज डेस्क !2years ago September 5, 2018
भारतमा रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता तथा कार्यकर्तालाई सङ्गठित गर्न प्रजातन्त्रका संवाहक तथा नेपाली काङ्ग्रेसका संस्थापक नेता र पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री महामानव बीपी कोइरालाले नेपाली काङ्ग्रेसको लोकतान्त्रिक आन्दोलनका गतिविधि तथा अभियानलाई गतिशील रूपमा अगाडि बढाउन नेपाली जनसम्पर्क समिति (भारत) गठन गर्नुभएको थियो । विदेशमा रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता–कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकहरूलाई सङ्गठित गर्ने हेतुले स्थापना गरिएको नेपाली जनसम्पर्क समिति अहिले विश्वका चार दर्जन मुलुकमा सक्रिय छन् । लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र समाजवाद नेपाली जनताका हकअधिकारका आधारभूत सेवा र सुविधाहरूको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने तमाम देशप्रेमी तथा राष्ट्रभक्त लोकतान्त्रिक विचारको शक्ति नेपाली काङ्ग्रेसको चारतारे झन्डामुनि गोलबन्द छन् ।
नेपालीको हक, हित र मानवअधिकारको रक्षार्थ र पार्टी मजबुत बनाउने जिम्मेवारीसहित अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली जनसम्पर्क समन्वय समिति विश्व सञ्जालको गठन गरिएको छ । यसै ‘विश्व सञ्जाल’का एक अगुवा तथा अभियन्ता हुन्– चित्र केसी । विश्व सञ्जालका उपसभापति चित्र केसी बाग्लुङमा जन्मिएर बुटवललाई स्थायी बसोवास बनाई अबुधाबी, यूएईलाई आफ्नो कर्मभूमि बनाउँदै आएका युवा हुन् । समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका केसीले आफूलाई विद्यार्थीकालमा नेविसङ्घका एक होनहार नेताका रूपमा चिनिएका थिए । सो राजनीतिक पृष्ठभूमिलाई उनले हाल नेपाली जनसम्पर्क यूएईको संस्थापक सभापति र काङ्ग्रेसको १३औँ महाधिवेशनको महासमिति सदस्यसमेत रही सक्रियताका साथ जीवन्त तुल्याइरहेका छन् । यूएईका विभिन्न नेपाली सङ्घ–संस्थामा सक्रिय केसी गैरआवासीय नेपाली सङ्घ यूएईका आईसीसी सदस्य निर्वाचित भएका छन् । विश्व सञ्जालबारे जानकारी लिने प्रयत्नस्वरूप उपसभापति केसीसँग गरिएको कुराकानी प्रस्तुत गरिएको छ ।
० यतिबेला नेपाली जनसम्पर्क समितिको के महत्व छ ?
– नेपाली जनसम्पर्क समिति नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा ठूलो बलिदानसहितको योगदान र समर्पण गरेको नेपाली काङ्ग्रेसको भ्रातृ सङ्गठन हो । त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले विदेशमा रहने नेता तथा कार्यकर्ता र शुभेच्छुकहरूको कार्यअनुसारको जिम्मेवारीलाई कदर गर्दै ऐतिहासिक भ्रातृ सङ्गठनलाई एक नेपाली जनसम्पर्क समितिलाई एक निर्वाचन क्षेत्रबराबरको हैसियत प्रदान गरी १२औँ महाधिवेशनदेखि केन्द्रीय नेतृत्व चयन र विधिविधान निर्माणमा सहभागी गरी पार्टीको अभिन्न अङ्गको रूपमा जिम्मेवारी दिई मार्गनिर्देश गर्दै आएको छ । विदेशमा रहने सबै लोकतन्त्रवादीहरूको माउ पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसप्रति हामी आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ ।
० राष्ट्रिय नेपाली जनसम्पर्क समिति हुँदाहुँदै अहिले अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय समिति विश्व सञ्जाल किन जरुरत पऱ्यो र यसका मुख्य उद्देश्य के हुन् ?
– जननायक बीपी कोइरालाद्वारा भारतबाट स्थापना भएको नेपाली जनसम्पर्क समिति अहिले विश्वका चार दर्जन मुलुकमा फैलिएको छ । यी समितिलाई समन्वय गर्न र पार्टीभित्र भएको गुट–उपगुटलाई समाप्त गर्न विश्व सञ्जालको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । विश्वभरि छरिएर रहेका नेपाली काङ्ग्रेसका तमाम नेता–कार्यकर्ता एवम् शुभचिन्तकहरूलाई सङ्गठित गरी नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई मजबुद र बलियो बनाई सहयोग गर्नु नै विश्व सञ्जालको मुख्य जिम्मेवारी हो । पार्टीको मजबुतीका लागि आपसी सद्भाव र भाइचाराको सम्बन्धले सकारात्मक रूपमा सङ्गठित हुनुको अर्को विकल्प छैन । विश्व सञ्जालको प्रमुख काम र कर्तव्य भनेको पार्टीको नीति र निर्देशनभित्र रहेर पार्टीका हरेक गतिविधिलाई सक्रिय रूपमा सहयोग गर्ने हुनेछ । पार्टीको संस्थागत विकास गर्न आर्थिक, भौतिक, राजनीतिक, वैधानिक र साङ्गठनिक सबै पक्षलाई सहयोग गर्न विश्व सञ्जालले पूरा मद्दत पुऱ्याउनेछ । नेपाली जनसम्पर्क समितिका सक्रिय नेता तथा कार्यकर्तालाई काम गर्ने खुला मैदानको स्वच्छ वातावरण निर्माण गर्नेछ । नेपाली जनसम्पर्क समितिको कामको क्षेत्र धेरै फराकिलो हुनेछ । अहिलेको पार्टी कमजोर भएको अवस्थामा विश्व सञ्जालले नेपाली काङ्ग्रेसको एक मेरुदण्डको रूपमा कार्यकर्तालाई उच्च मनोबल र भरोसा प्रदान गरी पार्टीलाई थप सशक्त बनाउन गर्ने काममा अहम् भूमिका निर्वाह गर्नेछ । विश्व सञ्जाल गठन गर्नुको मूल उद्देश्य या मर्म यही हो ।
० के विश्व सञ्जाल गठन गर्न आवश्यक छलफल भएको थियो ?
– नेपाली जनसम्पर्क समितिहरूमा विश्व सञ्जालको आवश्यकताको महसुस सबै देशका जनसम्पर्क समितिका साथीहरूले गर्नुभएको थियो । तर, कसरी गठन गर्ने भन्ने विधि र प्रक्रिया अलि नमिलेको अवस्था पनि थियो । विगत केही समयदेखि यसको गठन गर्नुपर्छ भनेर विभिन्न पक्षमा अनौपचारिक छलफल र बहस पनि चलिरहेको थियो । संसारका विभिन्न मुलुकमा बस्ने मानिसको समय फरक हुने हुँदा भौगोलिक रूपमा एकै ठाउँमा भेला हुन कठिनाइ भएकोले भौतिक रूपमा एकै ठाउँमा हुन सकिएन, तर पनि छलफल भएको छ र अझै हुँदै छ । यो हाम्रो सङ्गठनको आन्तरिक कुरा भएकोले सबैको भावना, मर्म र नेपाली काङ्ग्रेसका आदर्शबारे सधैँ छलफल–बहस हुँदै जान्छन् ।
० के पार्टीको अनुमतिले विश्व सञ्जाल गठन गरेको हो ?
– यो शुरुवातको प्रक्रिया भएकोले नेपाली काङ्ग्रेसले हरेक देशको राष्ट्रिय नेपाली सम्पर्क समितिलाई मात्र प्रतिनिधिसभाको एक निर्वाचन क्षेत्रबराबर मानेको छ । तर, विश्व सञ्जालबारे कुनै व्यवस्था विधानले गरेको छैन । पहिला राष्ट्रिय जनसम्पर्क समितिलाई पनि विधानले मान्यता दिएको थिएन । तर, पछि २००९ सालमा विधानले व्यवस्था गरेको हामीले मनन गर्नु जरुरी छ । अहिले विश्व सञ्जाल पनि विधानमा नभएकोले पार्टीको अनुमतिभन्दा पनि शीर्ष र मुख्य नेता तथा जनसम्पर्क समितिका अग्रज तथा सभापति, महाधिवेशन प्रतिनिधि एवम् महासमिति सदस्य, शुभेच्छुकहरूको सल्लाह–सुझावले गठन गरेका हौँ ।
० विश्व सञ्जालमा सबै समेटिएका छन्, प्रतिक्रिया कस्तो पाउनुभएको छ ?
– यो अहिले हामीले गठन गरेको तदर्थ समिति भएकोले एकै ठाउँमा भेला हुने सम्भावना न्यून भएको भौगोलिक दृष्टिले पनि हो । शुरुको गठन प्रक्रियामा सबै साथीलाई एकैपटक पहिलो चरणमा समेट्न सकिएको छैन, तर हाम्रो अभियान जारी छ । छुटेका साथीहरूलाई समायोजन गर्ने र सञ्जाललाई मजबुत र बलियो बनाउँदै छुटेका सबै साथीहरूलाई समेटेर एक साथ जानेछौँ । शुरुको चरणमा केही छुटफुट भएकोले सामान्य विरोधका स्वर आए पनि अहिले सञ्जालको आवश्यकता र औचित्यको आवश्यकता बोध साथीहरूलाई हुँदैै छ । त्यसैले सबै साथीहरू सकारात्मक नै हुनुहुन्छ ।
० यो त तदर्थ समिति मात्र हो, महाधिवेशनचाहिँ कहिले हुन्छ नि ?
– अहिले हामीले गठन गरेको विश्व सञ्जाल तदर्थ समिति नै भएकोले पार्टीका नेताहरूसँग मौखिक रूपमा छलफल भएकै छ । यसबारेमा उहाँहरू सकारात्मक हुनुहुन्छ । यसको गठन प्रक्रिया र पार्टीले सम्बोधन गर्ने विधानले स्पष्ट गर्नेछ । त्यसको लागि केही समयपछि पार्टीको महासमितिको बैठक हुँदै छ । त्यस बैठकमा विश्व सञ्जालको उद्देश्य र आवश्यकताबारे महासमिति बैठकमा हाम्रो एजेण्डा राख्नेछौँ । किनकि यस सञ्जालमा आबद्ध अधिकतम महासमिति सदस्य नै छौँ ।
वरिष्ठ कलाकार ठकुरी रहनुभएन
स्वेच्छाचारी गिरफ्तारी बन्द गर्न आयोगको आग्रह